Izikhangibavakashi To The Black Forest Germany | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Izikhangibavakashi To The Black Forest Germany
Kulabo abazi ukuthi banayo kakade, IBlack Forest yisifunda esinamahlathi amakhulu eningizimu-ntshonalanga yeJalimane. Ngini ngokuqondile, ukuthi etholakala isimo Baden-Württemberg futhi ithatha ingxenye enkulu kakhulu-ke.
Ngaphezu kwalokho, esifundeni komngcele France futhi Switzerland, ngakho-ke efinyelelekayo kusuka kulawo mazwe kanye.
Kulesi sihloko, Sizobuye sikhulume kabanzi mayelana nokuthi kungani kungcono kuwufanele ukuvakashelwa. Okubaluleke kakhulu, sizobe ikutshele ukuthi ufinyelele i-Black Forest eJalimane ngesitimela.
Ubuhle esifundeni itholakala njalo yimvelo, kodwa futhi abanye amadolobha ebabazekayo nasemizaneni. Kepha isimo ingxenye, le ndawo, kahle, egcwele amahlathi. Leyo ngxenye kucacile. Nokho, kukhona okuningi kuwo!
I-Black Forest, noma Schwarzwald njengoba kubizwa ngesiJalimane, kukhona izindawo eziningi nge ukubukwa amahle-panoramic. It nayo igcwele emfuleni emangalisa izigodi futhi libalele, langa iphakama kwabaningi amagquma ongakuthola lapha.
Ngaphezu kwalokho, kukhona inala izindawo ezingaba kube nentshisekelo abantu abaningi. Ungathola umndeni ezolile izindawo, umbhangqwana ezikhoselweni, kanye namathafa ngoba kulapho sikhexe abantu entsha.
Yini enye, uzothola kulo lonke lelo zwe langa futhi Fairytale-like unyaka wonke! Leyo Eqinisweni ngoba kubukeka umxhwele lapho kungcono libalele, liyana, futhi uma kukhona iqhwa. Ungabona kahle lokho ku- izithombe kakhulu le ndawo.
Indlela Finyelela Black Forest by zemininingwane
Ukufinyelela i-Black Forest by zemininingwane yinto ongayenza ngezindlela eziningi. Yilokho ikakhulu ngenxa indawo esifundeni kanye neqiniso lokuthi ukuqeqesha travel ngokusebenzisa eJalimane kuhle.
Nokho, akugcini. Ungakwazi ukufinyelela izindawo eziningi kule ndawo kusukela cishe kunoma iyiphi ingxenye I-Europe. Yilokho ikakhulu emadolobheni amakhulu emazweni afana no-Fulansi, Switzerland, Austria, Belgium, Italy, futhi abaningi.
Njengoba i-Germany, isitimela sokuvakasha yenziwe lula njengoba inkampani eyodwa - Deutsche Bahn usebenza ke. Okuhlukahlukene Izitimela ze-ICE, EuroCity, CityNight, kwamadolobha, futhi TGV imigqa kungathatha nibe ezindaweni abaningi abahlala kule ndawo. Ungakwazi ukugibela isitimela esiya Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, futhi Offenburg. Lezi izitimela hamba kuzo zonke emadolobheni amakhulu German, ngakho ngokuvakashela i-Black Forest ngesitimela kuyoba nowesivunguvungu.
Noma yini unquma ukwenza, ungeke uhambe okungalungile, ngoba ngokuvakashela i-Black Forest kungaba imilingo nakho. Sithi lokhu ikakhulukazi ngoba ungasebenzisa isitimela ebabazekayo futhi anqamule sonke isifunda. Uyothola ezintweni ezinhle kakhulu i-Black Forest oluyohlala. I-Black Forest umugqa ebabazekayo usebenza umzila Offenburg-Konstanz.
Vakashela i-Black Forest by zemininingwane nini You Want!
Njengoba ubona, ubuhle esifundeni kanye lula ikhambo isitimela ukwenza lolu hambo yinto enhle. Sibonga kakhulu ukweluleka nawe ukuthi ahambele leya ndawo imilingo kakhulu eJalimane okungenani kanye empilweni yakho! Nokho, ukuthi uhambo luba lude ngokwanele ngawe ukubona konke iBlack Forest oluyohlala!
Lapho unquma ukuthatha kithi ku lesi sipho, ukhululeke Xhumana Londoloza Isitimela. Singasiza uvakashela i-Black Forest ngesitimela futhi uthole isipiliyoni ukhumbuleka ngempela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fblack-forest-by-train%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ihlathi elimnyama #blackforestgermany izitimela amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela